Senior Sales Executive (Male) - IME Holdings Group
Senior Sales Executive (Male)
Any Graduate other related diploma will be preferred.
Proven working experiences of3year in FMCG Field.
Age between 30 to 40 years old.
Able to manage all staff & whole store.
Able to training for all staff.
Be active and clear communicate with others.
Can work with under pressure.
© IME Holdings. 2016. Another Creation of Media Lane, The Creative Agency.
IME International သည် မြန်မာ့စီးပွားရေးအလားအလာ အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော စက်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
IME International အနေဖြင့် လယ်သမားများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပိုမို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ထွန်စက်နှင့် အခြား လယ်ယာသုံး စက်မှုပစ္စည်းများ၊ စိတ်ချသေချာ၍ ‌စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝယ်ယူလိုသော လူလတ်တန်းစား customer များအတွက် အခြားသောစက်ပစ္စည်းများကိုလည်း တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိပါသည်။
IME International အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Customers အ‌ရေအတွက် ၉၇၀ ကျော်ရှိသည်။
ဝယ်ယူသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုနှုန်း ၇၇% ရှိခဲ့သည်။
Code of Conduct အား ချိုးဖောက်မှု ၁ခုရှိခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ suppliers များအနက် ၇၅% သည် မြန်မာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ supply chain အား စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် audits ၉ ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိသည်။
မတော်တဆမှု ၁၀ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သင်တန်းချိန် နာရီ ၃၀ ရရှိခဲ့ပြီး အများစုမှာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု နှင့် အခြားသော လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းအရည်အသွေးများ တိုးတက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် သင်တန်းများဖြစ်သည်။
IME Group အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် အသစ်အသစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှက်ရှိသည်။
IME အနေဖြင့် ၄င်း၏ နည်းဗျူဟာနှင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုအပေါ် မူတည်၍ မတူညီသော စီးပွားရေးကဏ္ဍမျိုးမျိုးတွင် အရင်းအနှီးများ ထည့်ဝင်လျှက်ရှိသည်။ (GGI၊ Yangon D2D အစရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ရင်းနှီးထည့်ဝင်ငွေများ ရှိသည်။)
Portfolio investment အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ Portfolio Investment link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
IME Group ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ
မြန်မာ Suppliers များ
IME အနေဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း သံဖြူနှင့် အဖြိုက်နက် တူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းအား လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အခြားသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူး‌ပေါင်းလုပ်ဆောင် လျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများ အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ Asset Management link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
စီးပွားရေး partners များ
မြန်မာငွေကျပ် သန်း၅၀ ကျော် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်း ပေါင်း ၁၂ ဦးရှိသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ၁ စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ ၁ စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝယ်ယူစားသုံးသူများအား ကောင်းမွန်သော ၀န်‌ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ရန် ခိုင်မာသော brand နှင့် အရင်းအနှီးများ တည်‌ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လျှက်ရှိသည်။
များစွာသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် IME အနေဖြင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော အစားအသောက်များနှင့် အဝတ်အစားများအား ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
Lifestyle အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ Lifestyle link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
လူလတ်တန်းစား customers များ
ဝယ်ယူစားသုံးသူပေါင်း ၂၀,၀၀၀‌ ကျော်ရှိသည်။
Transaction အရေအတွက် ၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။
ဝယ်ယူစားသုံးသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုနှုန်း ၉၆% ရှိခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီသည် လုံခြုံစိတ်ချရ၍ သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော၊ သေသပ်လှပသော ဒီဇိုင်းနှင့် အဆောက်အဦးများကို ဆောက်လုပ်လျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် clients များအား ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် စံနှုန်းများကိုသာ အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။
IME Construction အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ ဆောက်လုပ်‌ရေးလုပ်ငန်း link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့သည့် suppliers များ
လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းခွင်၇ခု ရှိသည်။
Customer satisfaction rate ၈၇% ရှိခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ suppliers ၉၉% သည် မြန်မာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၄၀ ကျော်ရှိသည်။
မတော်တဆမှု ၁ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် သင်တန်းချိန် ၁၂ နာရီရရှိခဲ့ပြီး အများစုမှာ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် အိမ်၊ခြံ၊မြေလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ စီမံခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ IME ၏ clients များအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းအစရှိသည့် facility management လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။
IME Property အကြောင်းအား ယခုဖော်ပြပါ အိမ်၊ခြံ၊မြေလုပ်ငန်း link တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Clients ၅၂ ယောက် ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ suppliers များအနက် ၉၉% သည် မြန်မာကုမ္ပဏီများ ဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိသည်။
ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပျမ်းမျှသင်တန်းချိန် ၁၈ နာရီရရှိခဲ့ပြီး အများစုမှာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများဖြစ်သည်။
IME Group invests its financial resources in funding new business ventures, to support the development of Myanmar business environment.
The Group has various interests in several business sectors. Depending on its strategy, and appetite, it can holdamajority stake (like Lola) oraminority stake (GGI, Yangon D2D, etc).
Get more information about our portfolio investments.
We develop, operate and manage the real-estate assets. We offer facility management services to our clients – maintenance, security, etc. – to ensure their comfort.
Discover more about IME Property business here.
99% of our suppliers are Myanmar
On average our employee received 18 hours of training, mostly related to finance
We explore and unearth minerals – mostly tin and tungsten in the Thaninthayi region.
Once we discover some potential, we partner with the relevant entities which will invest for operating the sites responsibly.
Get more information about our mining operations.
MMK 50 million donated for philanthropic purpose
1 Environmental Management Plan published
1 EIA Report published
We invest in building strong brands and assets which deliver unique experiences to our customers.
Through its different companies, our Group is offering new food and fashion experiences.
Get more information about our lifestyle activities.
Middle-class and urban consumers
Customer satisfaction rate: 96%
We distribute products and solutions, which are uplifting Myanmar economic potential.
We import high-quality products, which can be used by farmers to enhance the productivity of their work – tractors, commercial vehicles, etc. – or by middle-class consumers who are willing to get reliable, safe and affordable products.
Get more information about IME International.
Customer satisfaction rate: 77%
1 breach of our Code of Conduct
75% of our suppliers are Myanmar
9 audits to monitor our supply chain
On average, in FY18/19, our employee received 30 hours of training, mostly to develop soft skills, and the efficiency of the admin tasks
We construct sound buildings, which are safe, well designed, eco-efficient.
Their value will not be impaired, as we are working using the best available standards and materials to provide our clients with the best value for money.
Find out more about IME Construction business here.
Customer satisfaction rate: 87%
On average our employee received 12 hours of training, mostly related to health and safety at work in FY 18/19.